Shwe | April 12, 2020
ယနေ့ မှာတော့ တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး ၃ လုံး စားပေးခြင်း ဖြင့်ရရှိမည့် အကျိူးကျေးဇူးလေး ရေးပေးပါရစေ … ၁. အသက် ၄၀ ကျော်လာသည်နှင့် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ လျော့လာပြီး အရိုးအဆစ် နာကျင်လာတတ်ပါတယ် …. ဒါကြောင့် မနက် နေ့ ည ငှက်ပျော်သီးမှည့် ၃ လုံး စားပေးပါ။
ပန်းသီး ရှာလကာရည် အစွမ်း နဲ့ ခြေသည်း မှိုစွဲခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ကုသလိုက်ပါ
သင့် မှာ ဆီးချိုရောဂါ ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းက မသင့်တော်ပါဘူး လို့ ကြိုပြောပါရစေ… ထိရောက်တဲ့ ရလဒ်ရဖို့ အရင်ဦးဆုံး ခြေချောင်းလေးတွေကို သေချာဆေးပါ။ ခြေသည်းတွေရှည်နေရင် ညှပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ခြေချောင်းစိမ်မယ့်ရေကို စတင်ပြင်ဆင်ပါမယ်။ ရှာလကာရည်ဖျော်စပ်ပုံ ရှာလကာရည် (၁)ခွက်၊ ရေ (၂) ခွက်ထည့်ပါ။ သင့်ခြေထောက် အသားအရေက ဒဏ်ခံနိုင်တယ်
မနက်စာ ဟာ လူတစ်ယောက် အတွက် အရေးကြီးပါတယ်….မနက်စာ မစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ
မနက်စာ မစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ (၁) နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မနက်စာမစားတဲ့ အမျိုးသားတွေက မနက်စာ စားတဲ့သူတွေထက် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေ 27% ပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မနက်စာ မစားတဲ့သူတွေက နာတာရှည် နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ သွေးတိုး၊ လေဖြတ်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ (၂) ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ
လူ တစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေ ထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ် …. ။ ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် …. ။ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေ ဆိုရင်
ကျွန်တော် တို့ လိ င်ဆက် ဆံ ရင်း Covid-19 ကူး စက်နိုင်လား …? ဒီ မေးခွန်းကို လူကြားထဲမှာ သင်မေးဖို့ ရှက်နေလိမ့်မယ် ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ…။ အဲ့ဒီ အခက်အခဲကနေ ကျော်လွန်နိုင်အောင် ကျွန်တော် တို့ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ကို သင့်အစားမေးပေးထားပါတယ်….။ လေ့လာကြည့်ရအောင်…. ယခု
အဖုံး မပိတ်ဘဲ အိမ်သာ ရေးဆွဲချခြင်းရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် အန္တရာယ်….လူတော်တော်များများ သတိမထားမိတက်တာမို့ သတိထားမိသွားအောင် ရှယ်ပေးသွားကြပါ
ဟိုအရင် ခေတ်တုန်းကတော့ အိမ်သာ ဆိုရင် တိုးလျှိုပေါက် အောက်ကိုမြင်နေရတဲ့ အိမ်သာတွေ ကနေ ယင်လုံအိမ်သာတွေ၊ အခုဆိုရင် ဘိုထိုင်အိမ်သာတွေ အထိ လူနေမှုပုံစံ တိုးတက်လာတာနဲ့မျှ အိမ်သာတွေ ဆိုရင်လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်စေဖို့ ဒီဇိုင်းနဲ့ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲလာ ခဲ့ကြပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဘိုထိုင် အိမ်သာတွေကတော့ နောက်ဆုံးပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့ အိမ်သာ
မကြာခဏ ခေါင်းကိုက်နေသူများ အတွက် သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း
ခေါင်း သိပ် ကိုက်လျင် (ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေသူများ အတွက် လက်တွေ့ နည်းလမ်းကောင်း) နည်းလေး က အမှန်လွယ် သလို တကယ်ပဲ ထိရောက်ပါသည်။ ထူးထူးထွေထွေ လုပ်စရာလည်း မလိုပါ။ လူတိုင်း လက်တွေ့ စမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းပါ ။ ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ပါက ကြက်သွန်ဖြူ တစ်ဥ၊ တစ်မွှာကို ခွာပြီး
ရဲယိုသီး ကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေ အမြဲစားသုံးလေ့ရှိတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ရဲယိုပင် က ရှားပါးတဲ့ အပင်မျိုး မဟုတ်ပဲ နေရာဒေသတိုင်းမှာ ပေါက်ရောက်နိုင်လို့ အပင်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် အိမ်တိုင်း စိုက်ပျိုးထားသင့်တဲ့ နတ်ဆေးပင်ပမာ အစွမ်းထက်တဲ့ အပင်တစ်ပင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲယိုသီး က ဒီတိုင်းစားရင်တောင် အစွမ်းထက်တဲ့ အသီးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အပြင် ရောဂါပေါင်း (၁၀၁)
ဈေးက ၀ယ်လာတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကနေ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်သလား ..? တကယ်လို့ ကူးနိုင်ရင် ဘယ်လို သန့်စင်ကြမလဲ…?
အသီး အရွက် တွေ ကို ဘယ်လိုဆေးမလဲ… ⁉️ ဈေးကဝယ်လာတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ အပေါ် virus ကပ်ပါလာမှာ စိုးကြမှာပါ ။ တယောက်ယောက်က ချောင်ဆိုးသွားရင်၊ လက်နဲ့ကိုင်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ တွေးကြတာပါ။ အခုအချိန်အထိ ပိုးရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားမိလို့ ကူးစက်တဲ့ case မရှိသေးပါ။ 🇪🇺 European Food Safey
ဒီအဖိုးတန် နည်းလေး ကို စာသင်သား ဘဝတုန်းက အခုအချိန်ထိ ပြုလုပ်နေတာပါ။ စ လုပ်တုန်းက ဒီလိုပဲ တစ်နေ့လုပ်လိုက် ၊ တပတ်ပျက်လိုက်လေ… နောက်ပိုင်း ခြေထောက်ကို ရေမလောင်းပဲ မျက်နှာမသစ်တတ်တော့ဘူး … မို့လို့ပါ။ နည်းလမ်းက … ပထမဦးဆုံး အိပ်ရာကနိုးပြီးပြီးချင်း ၊ မျက်နှာကို အရင်မသစ်ရဘူး ၊ ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံး